Iskaashatada Wadaagga: Maamul Isbahaysigaaga, Iibiyaashaada, iyo Wada-hawlgalayaashaada | Martech Zone
Iskaashatada Wadaagga: Maaree Isbahaysigaaga, Iibiyaashaada, iyo Wada-hawlgalayaashaada
Khamiista, Sebtember 24, 2020 Arbacada, Janaayo 13, 2021 Douglas Karr
Adduunkeenu waa mid dijitaal ah oo inbadan oo ka mid ah cilaaqaadkaas iyo ka qaybqaadashadu waxay ka dhacayaan khadka tooska ah sidii horeba. Xitaa shirkadaha dhaqameed waxay u wareejinayaan iibkooda, adeegyadooda, iyo waxqabadyada khadka tooska ah… runti waa wax cusub oo caadi ah tan iyo markii masiibada iyo qufulka la joojiyay.
Suuqgeynta afku waa waji muhiim u ah ganacsi kasta. Xagga dhaqanka, tixraacyadaasi waxay noqon karaan kuwo aan fiicnayn… gudbinta lambarka taleefanka ama cinwaanka iimaylka ee saaxiibkay isla markaana sugaya inta taleefanku dhacayo. Adduunyada dhijitaalka ah, cilaaqaadka lala yeesho lamaanayaashaaga waa lala tacaali karaa, lala socon karaa, laguna hirgelin karaa khadka tooska ah iyadoo waxtar weyn la helayo.
Waa maxay Maareynta Xiriirka Wadaagga (PRM)?
Maareynta xiriirka lamaanaha waa nidaam hanaan, istiraatiijiyad, barnaamijyo, iyo kartiyo shabakad ku saleysan oo ka caawiya iibiyaha inuu maareeyo xiriirka lammaanaha. Wada-hawlgalayaasha waxaa ka mid noqon kara iibiyeyaasha kale, soo-gudbiyaal kor iyo hoos u socda, suuq-geyn ku xiran, iyo iibiyeyaal.
Barnaamijyada wada-hawlgalayaashu waxay u beddelaan hay'adaha, kuwa wax iibiya, iyo kuwa wax iibiya ee horay ugu sii iibiyey macaamiishaada wanaagsan sidii loogu kordhin lahaa kooxdaada wax iibisa Taasi waa sababta shirkadaha SaaS ee sida ugu dhakhsaha badan u koraya ay u adeegsadaan iskaashiyo ay ku kaxeeyaan soo iibsiga, haynta, iyo dakhliga, wixii ka baxsan waxa keli ah ee suurtagal ah.
Iskaashatada waa maareynta Xiriirka Xiriirka Lamaanaha iyo suuqa. PartnerStack waxay qabataa wax kabadan maareynta iskaashiyadaada - waxay dhistaa wadiiqo cusub oo dakhli iyadoo xoojinaysa lamaane kasta si uu uguuleysto.
PartnerStack waa kan kaliya maareynta lamaanaha loogu talagalay in lagu dedejiyo dakhliga soo noqnoqda ee labada shirkadood iyo wada-hawlgalayaasha ay la shaqeeyaan - maxaa yeelay lamaanayaashaada 'guushooda waa idinka. Tilmaamaha iyo faa'iidooyinka waxaa ka mid ah:
Cabir kanaalo badan - Haddii aad raadineysid inaad xirto heshiisyo badan, inaad abuurto hoggaamiyeyaal badan ama aad u keento taraafikada ololahaaga soo socda, PartnerStack waxaa loo dhisay inuu maareeyo nooc kasta oo iskaashi ah - dhammaantoodna hal mar.
Raad-raac xiriiriyeyaasha lammaanaha, hoggaamiyeyaasha, iyo heshiisyada gudaha PartnerStack
Dhexgal barnaamijyada daacadnimada macaamiisha si toos ah badeecadaada
Si toos ah ugu iibi shabakadaha qaybiyaha ee leh PartnerStack API
Kordhi waxqabadka lamaanaha - Barnaamijyada mudnaanta siiya hawlgelinta waxay soo saaraan dakhli badan. PartnerStack wuxuu kaa caawinayaa inaad u abuurto waayo-aragnimo u gaar ah mid kasta oo ka mid ah kanaaladaaga lammaanahaaga, adigoo ku barbaarinaya la-hawlgalayaasha cusub kuwa wax qabadka ugu sarreeya.
Abuur kooxo wada-shaqeyn leh qaab-dhismeed abaalmarin iyo nuxur u gaar ah
Kusamee lammaanaha dusha sare foomamka gaarka ah iyo socodka emaylka
Ku marti qaado hantida suuq geynta lamaanahaaga dashboorka lammaanahaaga
Automate siinta lammaanahaaga - Mid ka mid ah sababaha ugu badan ee shirkaduhu barnaamijkooda ugu raraan PartnerStack: waxay ku daaleen waqti luminta iyagoo hubinaya in lammaanayaashu ay mushaar helaan bil kasta. PartnerStack ayaa ku siisa wada-hawlgalayaasha adiga.
Hel hal qaan-sheegasho bille ah, oo lagu bixiyo kaarka deynta ama ACH
Wada-hawlgalayaashu waxay ka laabtaan abaalmarintooda iyaga oo maraya Stripe ama PayPal
U hoggaansanaanta xeerarka caalamiga ah isla markaana kooxaha maaliyaddu siiso aragti
Waxaan u adeegsannaa PartnerStack si aan awood ugu siino tixraaca macaamiisha, kuwa gacansaarka la leh, iyo kuwa iibiya. Waa xal hal-joogsi ah oo loogu talagalay lammaanaha dusha, dhaqdhaqaaqa, lacag-bixinta iyo dhammaan baahiyaha maamulkeena; casriyayn cusbooneysiin ah muuqaalka tikniyoolajiyadda lammaanaha jira.
Ty Lingley, Agaasimaha Iskaashatada Iskaashatooyinka
PartnerStack wuxuu leeyahay suuq firfircoon boqolaal shirkadood oo adeegsanaya barnaamijyadooda, awoodna siinaya la-hawlgalayaasha (sida aniga oo kale) inay baaraan oo ay aqoonsadaan fursadaha lagu dhiirrigelinayo agabyada waaweyn. Waxay ku leeyihiin softiweer dhinacyo kala duwan - oo ay ku jiraan Kheyraadka Aadanaha, iibka, suuqgeynta, xisaabinta, horumarka, wax soo saarka, warbaahinta bulshada, iyo inbadan
Sii Qabso Demo Wadaag Maanta
Bixinta: Waxaan ku xiran nahay Iskaashatada!
Tags: madal maaraynta gacansaarkamarketing affiliatemadal raacsanmaaraynta lamaanahamaareynta lamaanahamaaraynta xiriirka lammaanahahawlwadaagprmmaaraynta gudbintamaareynta lamaanaha gudbintamadal tixraacmadal maaraynta iibiyahamadal iibiyahasaaswaa maxay prm
Xaqiijinta Emailka iyo Xaqiijinta
Degaanka: Samee Macluumaad Desktop ah si aad u Hormarin iyo Isku Xidho Boggaaga WordPress